$170 Monthly - Apartment, Residential
Gurigan waa guri kooban kuna yaala xaafada jigjigayar. waxaa uu u dhaw yahey school-ka Al-Irshaad. wuxuu ka kooban yahey 2 qol oo jiif ah iyo…
4 Bedrooms 1 Bathroom	Added to Compare Add to Compare
$350 Monthly - Residential, Villa
Gurigan waa guri dabaq ah G+1 kuna yaala xaafada jigjigayar, Hargeisa, Somaliland. gurigu wuxuu u dhaw yahey masjidka cumar cusmaan. waxaa uu ka kooban yahey…
108 Sq Meter 6 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Garage	Added to Compare Add to Compare
Guri kuyaal October
Waxaa macaamiisha sharfa lagu wargalinayaa iney shirkada…	Read More